पोलिग्राफ परीक्षणको रिपोर्ट: भ्रष्टाचारका अभियुक्तले बोल्छन् सबैभन्दा धेरै झुट | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
पोलिग्राफ परीक्षणको रिपोर्ट: भ्रष्टाचारका अभियुक्तले बोल्छन् सबैभन्दा धेरै झुट
प्रकाशित मिति १६ श्रावण २०७६, बिहीबार १६:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । घुससहित पक्राउ परेका भ्रष्टाचारका अभियुक्तले सबैभन्दा धेरै झुटो बोल्ने गरेको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुससहित पक्राउ गरेकाहरूले नै धेरै झुटो बोल्ने गरेको प्रहरीको पोलिग्राफ परीक्षणले देखाएको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका अनुसार एक वर्षको अवधिमा प्रहरीले भ्रष्टाचारमा संलग्न ३२ अभियुक्तको पोलिग्राफ परीक्षण गरेको थियो । जसमध्ये २४ अभियुक्तले झुटो बोलेको परीक्षणबाट देखिएको छ ।
‘अख्तियारले हामीकहाँ भ्रष्टाचारमा संलग्न ३२ अभियुक्त पठायो, जसमध्ये एक महिला थिए । हामीले यसमा प्राविधिक सहयोग गर्‍यौँ,’ एसएसपी ज्ञवालीले भने, ‘परीक्षण गर्दा दुई जनाले भने सत्य बोलेको भेटियो । तीन जनाले परीक्षण गर्न मानेनन् । एकजनाको परीक्षण गरिए पनि राय आउन सकेन । अर्का एकको भने परीक्षण नै हुन सकेन ।’
प्रहरीका अनुसार अनुसन्धान जटिल मोडमा पुगेपछि जबरजस्ती करणीका १५ अभियुक्तलाई पोलिग्राफ परीक्षणका लागि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको प्रयोगशाला लगिएको थियो ।
जसमध्ये ६ अभियुक्तको बयान सत्य रहेको प्रहरीको भनाइ छ । पाँच अभियुक्तको बयान भने झुटो रहेको पाइयो । बाँकी तीनजनाको पोलिग्राफ परीक्षण नै हुन सकेन । घटनामा संलग्न अर्का एक अभियुक्तको भने राय निर्णयमा पुग्न नसकेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रहरी कार्यालयका अनुसार चोरी घटनामा संलग्न अभियुक्तको पोलिग्राफ परीक्षण गर्दा अपराध स्विकार्ने धेरै भएको पाइएको छ । तथ्यांकअनुसार प्रयोगशालामा सहभागी चोरीका १७ अभियुक्तमध्ये १४ जनाले अपराध स्वीकार गरेका थिए । झुटो बोल्ने एक जना भेटिएको छ । बाँकी दुईको भने परीक्षणपछि पनि राय दिन सकिएको छैन ।
कार्यालयका अनुसार साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान जटिल मोडमा पुगेपछि दुई अभियुक्तलाई पोलिग्राफ परीक्षणका लागि प्रयोगशाला लगिएको थियो । तर, दुवै अभियुक्तले झुटो बयान दिएको प्रहरीको भनाइ छ । कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा परेका सातमध्ये चार अभियुक्तले सत्य बोलेको, दुईले झुटो बोलेको र एकको परीक्षण हुन नसकेको पोलिग्राफ परीक्षणबाट देखिएको छ ।
काठमाडौं । संसारभर करोडौं मान्छेले फेसबुक प्रयोग गर्छन् । यो प्लेटफर्ममा विभिन्न किसिमका बहस र आपत्तिजनक पोस्ट पनि भइरहेका…
कति पावरफुल सरकार !
प्रहरी र निर्दोस जनता मार्ने अपराधी
सांसद बन्छ !
अदालतमा मुद्दा चल्छ
जेल भित्रै बसेको अपराधीलाई निकालेर
सरकार शपथ खुवाऊ भन्छ !
इरानमा भीषण बाढी, झण्डै दुई दर्जनको मृत्यु, सय भन्दा बढी घाइते
काठमाडौं । दक्षिणी इरानमा आएको भीषण बाढीमा परी कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गएको छ । बाढीमा परी १०० भन्दा…
​बिजुलीको मूल्य बढाउने भारतीय प्रस्ताव नेपालद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं । नेपालले भारतबाट आयात गर्दै आएको बिजुलीको मूल्य बढाउन भारतीय पक्षले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ ।
काठमाडौँ । बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका परिवारको पेन्सन तथा उपचार खर्चमा दिइने सहयोग रकममा वृद्धि गर्ने घोषणा…
नेपालकै ठूलो खुकुरी 8 views